न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता के हो? लेक्सिकनमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki न्यूनतम राजधानी आवश्यकता
न्यूनतम राजधानी आवश्यकता
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता - यसको मतलब के हो?
यदि एक ऋण को लागि ग्राहक को रूप मा चासो छ या एक ऋण को प्रश्न पछि पछि छ इक्विटी बैंकहरूको लागि एक ठेठ बिन्दु। इक्विटी निर्धारित गर्दछ कि कसरी ऋण वा ऋण सेट गर्न सकिन्छ। यो पनि अर्थ हो कि इक्विटी सँधै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा गणना गर्दैन जुन महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ जुन बैंक वा संस्था द्वारा उपलब्ध छ। त्यहाँ केहि अवस्थामा छन् पनि एक न्यूनतम सीमा। यो न्यूनतम सीमा बैंकबाट एकै अर्को सम्बन्धित वस्तुमा निर्भर गर्दछ। यसको अर्थ आधारभूत फरक फरक हुन सक्छ भने आधार फरक फरक हुन सक्छ। न्यूनतम जम्मा पनि0मानमा हुन सक्छ। अर्को फरक छ कि वित्त पोषण एक वस्तु वा सम्पत्ति को एक वस्तु वा नि: शुल्क निपटान हो कि छैन।
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता - ग्राहकको रूपमा के कारकहरू विचार गर्नुपर्छ
न्यूनतम जमातमा वा धेरै मा धेरै कारकहरू छन् न्यूनतम राजधानी आवश्यकता खातामा लिनु पहिलो र प्रमुख, निश्चित रूपमा, एक ग्राहकको रूपमा तपाईंले जाँच गर्नुपर्छ कि कुन बैंकले प्रस्ताव प्रदान गर्दछ। यहाँ तपाईंले खातामा लिनु पर्छ विशेष गरी ब्याज दर र निश्चित रूप देखि ऋण वा ऋण को सम्बन्धित अवधि। यसले यस बिन्दुलाई बैंकबाट प्रत्यक्ष प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न यस कुरालाई अर्थ दिन्छ। यसमा एक सरल कारण छ। यी प्रस्तावहरूको सहयोगमा एकले एक हातमा अर्को हातमा धेरै राम्रो तुलना गर्न सक्छ पनि विशेष गरी आफ्नै विचार दर्जा प्रस्तावहरू को लागि बनाइन्छ। किनकी वास्तवमा हरेक ऋण अनुरोध अर्कोबाट फरक हुन सक्छ।
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता उत्पन्न कसरी भयो?
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता बैंक द्वारा गणना गरिएको छ र विभिन्न कारकहरूलाई बुझाउँछ। कस्तो प्रकारको वित्तपोषणमा निर्भर छ, निस्सन्देह, यो मूल्य विचलित हुन्छ। इस्पात ग्राहक को लागी विचार गर्न को लागी कि न्यूनतम जम्मा वास्तव मा इक्विटी फाइनान्सिंग को निम्नतम सीमा हो। यही छ, यस मूल्य अधिक उच्च सम्बन्धित बैंकहरू जुन तपाईले सम्बन्धित बैंकबाट ग्राहकको रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता किन महत्त्वपूर्ण छ?
इक्विटी बैंकका दुई कारणका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ र यसैले ब्याज दर गणना गर्नमा महत्त्वपूर्ण कारक हो। एकै ओर, लगानी गरिने इक्विटी ग्राहकको लागि व्यक्तिगत खतरा प्रतिनिधित्व गर्दछ। एकै समयमा यस बैंकको लागि यो अर्थ राम्रो तरिकाले सोचेको छ र महत्त्वपूर्ण तर्कहरूसँग जोडिएको हो। अर्कोतर्फ, इक्विटी राजधानीले बैंकिङलाई पनि अवसर प्रदान गर्दछ ऋण रकम कम गर्न। यो अर्थ छ कि बैंकको लागि रकम रकम गुमाउनुको जोखिम निकै कम छ किनकि ऋणको योग भन्दा कम छ यदि यो पुरा तरिकाले वित्त पोषित भएको थियो।
न्यूनतम इक्विटी आवश्यकतामा निष्कर्ष
यो छोटो सारांशबाट यो हेर्न सजिलो छ कि कति व्यक्तिले न्यूनतम जमातमा कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साथै, निस्सन्देह, यो यसमा साझेदार मा निर्भर गर्दछ। नियमको रूपमा, बैंक वा ठूला कम्पनीहरू। निस्सन्देह, लगानीकर्ताहरू केवल गुणहरूमा लगानी गर्न चाहन्छन् कि, तिनीहरूको विचारमा, पनि लाभ कमाउँछ। निस्सन्देह न त बैंक र न कुनै कम्पनी बेकार देखि आफ्नो पैसा विन्डो बाहिर फेंकन्छ। यस कारणको लागि, इक्विटी राशि को बावजूद, निश्चित रूप देखि, प्रत्येक निवेश को लागि प्रस्तुति महत्वपूर्ण महत्व को हो। फेरि, यसले ब्याजको स्तरलाई प्रभाव पार्नेछ र बेशक, ऋण को अनुमोदित वा छैन भन्ने प्रश्न। यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले ग्राहकको रूपमा अग्रिम योजना तयार पार्नुको साथै सर्वोत्तम तरिकामा सम्बन्धित परियोजनालाई सम्लग्न गर्न।
अघिल्लो लेखमेजानाइन वित्त
अर्को लेखधन को प्रयोग